China Plant Cat inkunkuma Ukwenziwa kunye Factory | KwiBondhot
I-Tofu cat Litter eyenziwe ngento yokutya, iembotyi zembotyi njengezinto eziphambili, ezixutywe nesitashi sombona, ezimile kwikholamu, umkhondo omncinci kunye nonyawo oluhle luziva isilwanyana.
Yincasa ecocekileyo yokususa deodorization, akukho-toxin, akukho luthuli, ukufunxa okukhawulezayo, ukugoba ngokukhawuleza kwaye kunzima, ukukhutshwa kunye nokugungxulwa kwindlu yangasese kwaye kunyibilike ngaphakathi kwemizuzwana eyi-15, akukho msebenzi wokulahla inkunkuma. Uhlobo lwendawo entsha enobuhlobo enqabileyo yekati kule mihla.
Igama lemveliso I-Eco-friendly Soy Cat Litter Umenzi weTofu Kitty Litter Iimpawu ezininzi Yoqobo, iApple, iLamuni, iLavender, iti eluhlaza okanye ngentando yakho
Igama lebrand OEM Izithako eziphambili I-ertyisi intsalela, umgubo we-Soy, i-Cornflour, i-Guar Gum
Ukusetyenziswa Ikati iToliet Imilo IGranule kunye ne-Solid kunye neColimnar kunye neStrip
Ububanzi 2mm Ubude 4-12 mm
Uvavanyo lwe-SGS Akukho Formaldehyde kunye ne-Aspergillus Flavus kunye neBacteria kunye ne-Heavy Metal eChongiweyo, evavanywe ngomlomo engeyiyo ityhefu Iimbonakalo Ukwenza ngokulula ngokulula, Ukudityaniswa okukhawulezileyo, i-Natural Biodegradable, Flushable, Hypoallergenic, Ultra Odor Control
Ukuxinana 0.65 - 0.7g / ml Ukufunxa amanzi > Iipesenti ezingama-600
Ukuxhathisa okuxineneyo (g) > 400g Indawo yokuQala Iphondo laseShandong, China
Izongezelelo ezihambelanayo Ayifakwanga Imichiza Ayifakwanga
Uncedo Ukufunxa okuphezulu kakhulu Ibhokisi eyiLitter Cat efanelekileyo Uluhlu olulodwa lweKati yokuLalisa ibhokisi
Ixesha lokuzisa Iintsuku ezili-15 zeBrand yethu; 20 ~ 30 iintsuku OEM & ODM Ikhowudi ye-HS 23031000
Uhlobo lweBhegi 6L okanye 7L kunye 18L okanye wena Iphakheji Ingxowa + yeBhokisi yangaphakathi + ye-Master Carton
A: Singumzi-mveliso othe ngqo kwaye singathumela ngaphandle ngokwethu.
I-Q2: Ngawaphi amandla onawo?
A: Sinamava amaninzi okuthumela ngaphandle; Iimveliso ezikumgangatho ophezulu; Izinto ezizinzileyo kunye nokusingqongileyo; Ixabiso lokhuphiswano lomzi mveliso; Inkqubo engqongqo yokujonga umgangatho; Iinkonzo ezinomdla emva kokuthengisa.
Q3: Ndingafumana isampulu, kwaye isimahla?
A: Intlawulo yesampuli iya kubuyiselwa kuwe xa ufaka iodolo enkulu.
I-Q4: Ngaba ubuncinci bobungakanani kunye nexesha elikhokelayo leesampulu ziyaxoxisana?
A: Ewe. Ubungakanani obungaphantsi kwe-MOQ ephantsi bunokuxoxwa phantsi kweemeko ezithile; Sisenokufuna ixesha elide lokukhokela iisampulu ezizodwa. Nceda usazise imigaqo kunye neenkxalabo zakho, kwaye siya kuzama ukuza nezisombululo ezifanelekileyo.
Q5: Yeyiphi indlela yokuthumela?
A: Ngokwemfuno yakho, abanikezeli beenkonzo zokuhambisa ezahlukeneyo banokukhethwa, njengeFEDEX, iDHL, TNT njalo njalo; ngomoya okanye elwandle. Ixabiso lokuhambisa ngenqanawa lixhomekeke kwiindlela zokuhambisa, ubunzima bemveliso kunye nevolumu, kunye nendawo ekuyo indawo yakho. Emva kokuhambisa iimpahla, siya kukuthumela inombolo yokulandela umkhondo ngokukhawuleza, ukuze ukwazi ukulandelela iimpahla zakho ngexesha.
I-Q6: Liliphi ixesha lokujika elijikelezayo?
A: Izinto zethu zihlala zithunyelwa ngeentsuku ezi-7 ukuya kwezi-14. Ulibaziseko lunokwenzeka ngenxa yeemeko ezingalindelekanga.
I-Q7: Yeyiphi indlela yokuhlawula?
A: Sixhasa iindlela zokuhlawula eziguqukayo, ngcono nge-T / T.
I-Q8: Ngaba singaprinta uphawu lwethu okanye ilogo kwiimveliso zakho?
A: Ngokuqinisekileyo. Kuya kuba luyolo lwethu ukuba ube ngumenzi wakho we-ODM kunye nowe-OEM eTshayina.
I-Q9: Kutheni ezinye iimpahla zinomahluko phakathi kwefoto yewebhusayithi kunye nezinto ezenziwayo?
A: Ngenxa yomehluko wokukhanya kunye neibrawuza kwizikrini, iifoto zezesalathiso kuphela. Phakathi kwamaqela ahlukeneyo, izinto zinokuthi zahluke kancinane.
Egqithileyo Iipads zepuppy
Okulandelayo: isanti yekati